नायिका नीता ढुंगानाको बिल्कुलै नया गीत “सुपर ग्लू” (भिडियो हेर्नुहोस)
गीतकार अम्बिका गुरुङका शब्दमा आधारित बिल्कुलै नया“ गीत ‘सुपर ग्लू’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उनी अमेरिका बस्छिन । गायक रमेश श्रेष्ठ मेलोडीको स्वरको उक्त गीतलाई गायक श्रेष्ठले नै संगीतबद्ध गरेका हुन् । गीतमा प्रतिक अधिकारी (अजात) ले र्‍याप हानेका छन् ।
गीतलाई मानषी किरणले संगीत संयोजन गरेका हुन् भने अशोक महर्जनले यसलाई मिक्सिङ तथा मास्टरिङ गरेका हुन् । नृत्यपरक उक्त गीतको म्युजिक भिडियोलाई राहुल बराइलीले निर्देशन गरेका हुन् । बासु न्यौपानेद्वारा छायांकन गरिएको उक्त भिडियोमार्फत अभिनेत्री नीता ढुंगाना लामो समयपछि दर्शकमाझ आएकी छिन् ।
भिडियोमा अभिनेत्री ढुंगानाको नृत्य कौशल देख्न सकिन्छ । भिडियोलाई अभिनेत्री ढुंगानालाई नविन राई तथा विशाल लामाले साथ दिएका छन् । भावसागर इन्टरटेन्मेन्ट एलएलसीको आधिकारिक यूट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको उक्त म्युजिक भिडियोलाई विकाश ज्ञवालीले सम्पादन गरेका हुन् । भिडियो हेर्नुहोस ।
* खुशी कसरी हुने ? (जानी राखौ)
तपाई जीवनमा कति खुसी हुनुहुन्छ ? हरेक व्यक्ति जीवनको कुनै न कुनै कालखण्डमा आफूले आफैंलाई प्रश्न गर्दछ । तपाई अहिले याे प्रश्नकाे उत्तर आफूमा नै खोज्दै हुनुहुन्छ भने हामीसँग तपाईलाई केही सुझाव छन् ।
सकारात्मक मनोविज्ञानको मान्यता छ कि खुशी र उन्नति भनेकै स-साना राम्रा बानी बसाल्ने हो । यी स-साना बानीलाई जोडेर जीवन यतिसम्म परिवर्तन हुन सक्छ कि आफ्नो जीवनको परिभाषा हामी आफैं झन् सुन्दर बनाउदै जान्छौं । अध्ययनले के प्रमाणित गरेको छ भने अध्यनहरुले बताएका छन् कि
सकारात्मक दृष्टिकोण र प्रगतिउन्मुख सोचले हाम्रो कामको उत्पादकत्व क्षमता ३१ प्रतिशतले बढाउँछ । तपार्इकाे पद वा जागिरमा बढुवाको सम्भावना ४० प्रतिशतले बढाउँछ र तनावको भावमा २३ प्रतिशतको कमी हुन जान्छ ।
खुशी, उन्नतिप्रगती र उत्पादकत्व बढाउँन यी ४ उपाय मध्य कुनै १ उपाय २१ दिन लगातार दोहोर्याउनुहोस् अनि फरक महसुस गर्नुहाेस्, हरेक दिन एक मिनेट समय यो अभियानलाई छुट्याए पुग्छ ।
१) थप ३ पटक मुस्कुराउने
हरेक दिन, आफ्नो दैनिकीमा थप ३ पटक मुस्कुराउनुहाेस् । अभ्यास सारै सजिलो छ र यसको प्रतिफल निकै गहिरो पनि छ । एक छोटो मुसुक्क दिएको हाँसोले हाम्रो मस्तिष्कमा संकेत दि हाल्छ कि तपाई एक खुसी र सुखी प्राणी हो । जस्तै आफ्नो अफिस जादाँ अथवा केटाकेटीलाई स्कुल पुर्याउन जादाँ, कतिपय अनुहार सधैं देखिन्छन ।
सधैं एकै समय, एकै स्थान तर्फ लम्कने ती अनुहार देख्दा बिना केहि सोचेसम्झे, हाम्रो ओठ आफै तन्किन्छ- मुस्कुराउँछ । यो प्रकृतिको एक शक्तिशाली बरदान हो । जसले आजको आधुनिक भाषामा भन्नु पर्दा हाम्रो सम्बन्ध (नेटवर्क र रिलेसन) आफैं बढाउँछ ।
मुस्कानको अभ्यासले सामाजिक सहयोग र सुरक्षाको भाव पनि बलियो बनाउँछ । यसलाई तपाई नियमित योग अभ्यासको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ । अनि फेरि अर्को रमाईलो कुरा, मुस्कान एक सरुवा रोग हो । रुघा खोकी जस्तै छिटो अरुलाई सरिहाल्छ ।
तेस्रो अभ्यास, हरेक दिन ३ जना फरक साथी वा कोहि पनि चिनजानको व्यक्तिको उहाँ कै अगाडि प्रशंसा गर्नुहोस् । जस्तै: ‘तपाईको मुस्कान कस्तो राम्रो’, ‘अरुलाई सहयोग गर्ने तपाईको बानी मलाई मन पर्छ’, ‘तपाईले हरेक दिन मज्जाले पानी पिएको देख्दा मैले पनि यस्तै बानी सिकें ।’
तर याद राख्नुस्, यस अभ्यासले काम गर्नका लागि प्रशंसाका शब्द असलभावका साथ मनबाटै आएको हुनुपर्छ ।यति २१ दिन गरेपछि हेर्नुस्, तपाईको जीवन, सोच, वरिपरीको वातावरणमा कति फरक आउँछ । जीवनको एक नयाँ अर्थ तपाईसामू पक्कै अाउँछ ।
अरुलाई सरप्राईज दिने, हरेक दिन कसै न कसैका लागि केहि राम्रो काम एक्कासी गरिदिने, कामबाट घर फर्कदा, कहिले काँहि फुर्सद हुदाँ घरमा तरकारी-फलफूल किनेर लैजाने, कोही सह-कर्मीका लागि चिया-कफी मगाई दिने, अरुलाई आफ्नो माेटरसार्इकल या स्कुटरमा लिफ्ट अफर गर्ने आदि । यस्ता कामले तपाईको समयमा कुनै हानी पुर्याउँदैन र अरुलाई खुसी पनि बनाउँछ ।
(यो अमेरिकाको न्युयोर्कबाट प्रकाशन हुने टुटे म्यागजिनको माईड एण्ड बडी अंकमा २७ अगस्ट, २०१८ मा प्रकाशित लेखको नेपाली रूपान्तरण हाे ।)